Wararka - Suuqa waalka warshadaha ayaa ku jira qaab wanaagsan rubuca afaraad
Suuqa waalka warshadaha ayaa ku jira qaab wanaagsan rubuca afaraad
Saddexda rubuc ee hore ee 2016, dhaqaalaha qaranku wuxuu sii waday inuu si dhakhso leh u kobco, iyada oo kororka waxsoosaarka GDP ee 11.5%, taas oo siisay suuqa waalka kubbadda isbeddel wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka kuleylka dhaqaalaha ayaa sii socda, waxaana jira dhibaatooyin xoog leh oo laga yaabo inay dhaqaalaha u rogaan kuleyl, taas oo si deg deg ah loogu baahan yahay in si dhab ah loo qaato. Waxaa la filayaa in xawaaraha kobaca dhaqaalaha degdega ah ee rubuca afaraad uusan isbadali doonin. Ilaa iyo inta laga hadlayo warshadaha waalka, waxaa jira waxyaabo badan oo saameyn ku leh, kuwaas oo u qalma fiiro gaar ah.
Waqtigan xaadirka ah, dalkaygu wuxuu leeyahay baahi weyn oo loogu talagalay cusbooneysiinta waalka iyo casriyeynta tiknoolajiyada. Sanado badan ka dib sahamin suuqeed iyo tababar, warshadaha waalka waa inay noqdaan hormuudka ugu khibradda badan ka qayb qaadashada dhismaha. Gaar ahaan soo bandhigida siyaasad kabista waalka iibinta sanadka 2014, heerka kalasooca dalkayga ayaa si lama filaan ah kor ugu kacay heer cusub. Ururka Warshadaha Shiinaha ee Shiinaha wuxuu soo saaray qorshe horudhac ah oo ku saabsan isbadal farsamo ee warshadaha mashiinada beeraha oo ay taageerayaan lacagaha deynta qaranka sanadkii 2008, waxaana la rumeysan yahay in taageerada maaliyadeed ee deynta qaranka la kordhin doono sanadka soo socda.
Marka laga eego aragtida dalabka gudaha, waxaa jira arrimo badan oo togan, Isticmaalka badan iyo tikniyoolajiyadaha iyo qalabka, xaddidaya soo dejinta tiknoolajiyadaha muhiimka ah ee gudaha ee soo saaray awoodaha, tirtiraan siyaasadda ka dhaafitaanka cashuurta ee mashiinnada dhammeystiran iyo qalab dhameystiran, hirgelinta canshuurta dhiirrigelin iyo ka dhaafitaan cashuur ah oo loogu talagalay qaybaha muhiimka ah, iyo dhiirrigelinta dhiirrigelinta canshuuraha Shiinaha’s fallaaraha macdanta culus iyo filtarka injineernimada. , Qalabka Mashiinka, iyo qalabka batroolka. Dhismaha jidadka tareennada (oo ay ku jiraan waddooyinka tareenka xawaaraha sare ku socda) ayaa la dedejiyey. Celcelis ahaan maalgashiga sanadlaha ah ee 2007 - 2010 wuxuu dhaafi doonaa 300 bilyan yuan, dhismaha waddooyinka cusub ee miyiga ah waxaa lagu maalgelin doonaa in ka badan 400 bilyan oo yuan. , Warshadaha qalabka tareenka ayaa door weyn ka ciyaari doona wadista; xiritaanka miinooyinka dhuxusha yar yar iyo soo saarista kooxo waaweyn oo dhuxul dhagareed, sameysana kooxo dhuxul dhagareed gaaraya 5-7 bilyan, iwm. Intaa waxaa dheer, suuqyada dibedda, dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika, Koonfurta Ameerika, Koonfurta Aasiya iyo Bariga Yurub ayaa hadda bilaabmay, iyo in suuqyadu aad u weyn yihiin. Tani waxay u noqon doontaa suuq muhiim u ah shirkadaha gudaha inay mustaqbalka ka sahamiyaan dibedda.
Marka laga eego aragtida dalabka dibedda iyo beddelaadda soo dejinta, Shiinaha’geedi socodka magaalayntu waa mid aan dhammeystirnayn, iyo dhismaha baadiyaha cusub oo si xawli ah ku socda. Intaa waxaa dheer, alaabooyinka waalka injineernimada gudaha waxay ka sameeyeen horumar weyn xagga tayada iyo adeegga, beddelka noocyada shisheeyana si joogto ah ayey u socdaan. Sidaa darteed, waxaa la filayaa in saddexda sano ee ugu horreysa ay weli ahaan doonto xilli koritaan deg deg ah oo loo qabo baahida qalabka injineernimada.
Waqtiga boostada: Meey-22-2021